iOS 15.5 beta dia manakana ny fahatsiarovana ny sary nalaina tany amin'ny toerana "saropady" | iPhone News
iOS 15.5 beta dia manakana ny fahatsiarovana ny sary nalaina tany amin'ny toerana "saropady".
Tony Cortes | 28/04/2022 20:33 | iOS 15, maro
Apple dia nanao fanitsiana vaovao izay hita tao iOS 15.5 beta ary mety hiteraka resabe izany. Hita fa naka sary tao amin'ny tranokala iray izay heverin'i Apple ho "saropatin'ny mpijery" izahay, ary hanakana azy tsy hiseho ao amin'ny fizarana "fahatsiarovana" an'ny app Photos.
Ny resabe no ho voalohany, satria i Apple indray no manapa-kevitra ho antsika, tsy afaka manova ny fepetra, hifidy na tiantsika ny hanavakavahana na tsia ny fampiharana. Ary ny faharoa, dia ny orinasa no mifidy ny toerana, araka ny fepetra takiana.
Tamin'ity herinandro ity dia navoaka ho an'ny mpamorona ny beta fahatelo an'ny iOS 15.5. Ity fanavaozana vaovao ity dia mampiditra zava-baovao izay hitondra filaharana, tsy isalasalana. Manzana hanakana sary izay nalaina tao amin'ny "toerana tena saro-pady ho an'ny mpampiasa" ary tsy haseho ao amin'ny fizarana "fahatsiarovana" amin'ny fampiharana sary.
«jerena» dia singa iray amin'ny rindranasa Photos amin'ny iOS sy macOS izay mahafantatra ny olona, ​​ny toerana ary ny zava-mitranga ao amin'ny tranombokin'ny sarinao mba hamoronana fanangonana ho azy miaraka amin'ny sary mihetsika. Koa satria io fampiasa io dia mifototra tanteraka amin'ny fianarana milina, Apple dia nanao fanovana sasany tamin'ny algorithm an'ny fampiharana mba hialana amin'ny famoronana fahatsiarovana sasany momba ny toerana "tsy ilaina".
Hita fa ao amin'ny kaody iOS 15.5 beta 3 dia manana lisitry ny toerana saro-pady ho an'ny mpampiasa izao ny app Photos, ka izay sary nalaina tamin'ireo toerana voatokana ireo dia tsy hiseho mihitsy ao amin'ny fizarana "fahatsiarovana". Mahaliana fa ny toerana voarara rehetra amin'ity dikan-teny ity dia mifandray amin'ny Famonoana Tambabe ny Ady Lehibe Faharoa.
Lisitra misy lohahevitra tokana: ny fandripahana Nazi
Ity ny lisitry ny toerana voasakana ao amin'ny Fahatsiarovan'ny app Photos miaraka amin'ny iOS 15.5 beta 3:
Fahatsiarovana an'i Yad Vashem
Toby fitanana Dachau
Toby fitanana Majdanek
Fahatsiarovana Holocaust Berlin
Toby famonoana an'i Belzec
Toby famonoana an'i Sobibor
Toby famonoana an'i Treblinka
Toby famonoana an'i Chelmno-Kulmhof
Toby fitanana Auschwitz-Birkenau
Ny toerana tsirairay dia nomena latitude, longitude ary radius, noho izany tsy hiraharaha ny fampiharana Photos ny sary nalaina tamin'ireo toerana ireo tamin'ny famoronana fahatsiarovana vaovao. Mazava ho azy, Apple dia mety hanavao ity lisitra ity amin'ny toerana vaovao miaraka amin'ny fanavaozana iOS ho avy.
Tontosa ny resabe. Voalohany, satria Apple dia tsy mamela anao hisafidy raha te hiala amin'ireo toerana ireo ny mpampiasa na tsia. Ny orinasa dia mametraka izany aminao. Ary faharoa, maninona ireo toerana ireo ihany, fa tsy ny hafa izay azo sokajiana ho "sensitive", toy ny toerana misy ny Twin Towers any New York, nefa tsy mandeha lavitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » iOS 15.5 beta dia manakana ny fahatsiarovana ny sary nalaina tany amin'ny toerana "saropady".
Apple dia manavao ny firmware AirTag amin'ny sehatra mihodina